Maxay Yihiin Xirfadaha Suuqgeynta Casriga ah ee ugu Muhiimsan 2018? | Martech Zone
Maxay Yihiin Xirfadaha Suuqgeynta Casriga ah ee ugu Muhiimsan 2018?
Isniin, Oktoobar 1, 2018 Talaado, Oktoobar 2, 2018 Douglas Karr
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaan ka shaqeynayay manhajyo aqoon isweydaarsiyo suuq geyn ah iyo shahaadooyin shirkad caalami ah iyo jaamacad, siday u kala horreeyaan. Waxay ahayd safar aan caadi aheyn - si qoto dheer u falanqeynaya sida ganacsadeyaasheena loogu diyaarinayo barnaamijyadooda shahaadada rasmiga ah, iyo ogaanshaha nusqaamaha ka dhigaya xirfadahooda inay ka sii suuq badan yihiin goobta shaqada.
Furaha barnaamijyada shahaadada dhaqameed waa in manhajku inta badan qaato dhowr sano in la oggolaado. Nasiib darrose, taasi waxay dib-u-dhigeysaa ardayda qalin-jabisa sannado markii ay soo galaan goobta shaqada illaa ay laylisyo wax ku ool ah haystaan ​​mooyee.
Waxa ka muhiimsan barashada muuqaalka isbeddelka ee aaladaha teknolojiyadda suuqgeynta, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan hanaan asluub ​​leh oo ku wajahan qorsheynta, cabbiraadda, iyo fulinta qorshe kasta oo suuqgeyn ah Waa sababta aan u horumariyo liiska hubinta ololaha suuqgeyntaWaa liis dhammaystiran oo hubiya in dadaalkaagu u noqon doono mid u guuleysta sida ugu macquulsan.
Teknolojiyadda iyo warbaahinta bulshada ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay suuqgeynta dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Si aad u badan, milkiilayaasha ganacsiyada yaryar, ganacsatada, iyo suuqleyda ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay cusbooneysiiyaan xirfadahooda xirfadeed si ay si sax ah ula macaamilaan jiilka xiga ee macaamiisha (Gen Z) iyagoo si wax ku ool ah uga faa'iideysanaya tikniyoolajiyada horumarka leh. Jaamacadda Maryville Bachelor's ee Suuqgeynta
Jaamacadda Maryville waxay soo saartay liiskan faahfaahsan ee xirfadaha lagama maarmaanka u ah suuqleyda inay ku guuleystaan ​​goobta shaqada. Hubso inaad ku aqriso boostadooda oo buuxa faahfaahinta hoose, 11 Xirfadaha Suuqgeynta Casriga ah ee Hal abuurayaasha Ganacsiga ilaa Master.
Xirfadaha Suuqgeynta Casriga ah ee ugu Muhiimsan 2018
Suuqgeynta Mawduuca - Ururada dhammaan noocyadu waxay adeegsan karaan suuqleyda abuura waxyaabo asal ah, soo jiidasho leh, iyo hal abuur leh. 86% ee suuqleyda waxay u isticmaalaan suuqgeynta waxyaabaha sida qeyb joogto ah istiraatiijiyadooda, ha ahaadaan kuwa u shaqeynaya shirkado caalami ah ama kuwa yaryar, ganacsiyada maxalliga ah Si kastaba ha noqotee, kaliya 36% ayaa qiimeeya khibradooda suuq geynta waxyaabaha sida qaangaarka ama casriga ah. Abuurista maareynta iyo maareynta, falanqaynta webka, iyo maareynta mashruuca dhijitaalka ah dhammaantood waa xirfado muhiim ah oo ka jira aaggan.
Suuqgeynta Mobaylka - 219.8 milyan oo Mareykan ah - 67.3% dadka Mareykanka ah - waxay leeyihiin taleefan casri ah. Tani waxay ka dhigeysaa istiraatiijiyado moobiil muhiim u ah dadaalka suuqgeynta urur. Fursadda si loogula kulmo dhagaystayaal ballaadhan taleefanka gacanta waa la weynaan karaa, maaddaama dadka Mareykanku ay celcelis ahaan taleefannadooda ka eegaan 47 jeer maalintii. Tiradaasi waxay ku dhowdahay laban laab dadka Mareykanka ah ee da'doodu tahay 18 - 24, kuwaas oo hubiya taleefannadooda celcelis ahaan 86 jeer maalin kasta Xirfadaha Furaha ee aaggan ku jira waxaa ka mid ah naqshadeynta moobiilka, horumarinta mobilada, iyo falanqaynta ganacsiga e-commerce.
Suuqgeynta E-maylka - Suuqgeynta E-maylku waxay ahayd istiraatiijiyad aasaasi ah dhowr sano waana ay sii socon doontaa. 86% suuqleyda waxay adeegsadaan emayl si ay ugu qaybiyaan waxyaabaha suuqgeynta ku jira. Qalabaynta suuqgeynta, istiraatiijiyado ka qeyb qaadashada macaamiisha, iyo istiraatijiyadaha kobaca macaamiisha dhammaantood waa dilal muhiim ah oo ka dhex jira istiraatiijiyaddan.
Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada - 70% Gen Z wuxuu wax ku iibsadaa badeecadaha iyo adeegyada iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada, taasoo ka dhigaysa suuqgeynta warbaahinta bulshada xeelad lama huraan ah si loo gaaro tirakoobka dadweynaha boqolkiiba 69% ee Gen Z uu adeegsado Instagram, taasoo ka dhigaysa barta jiilka ugu caansan warbaahinta bulshada. Waxaa ku xigta Facebook iyo Snapchat, oo mid walba ay isticmaalaan 67%. Celcelis ahaan, suuqleydu waxay adeegsadaan shan barnaamij oo baraha bulshada ah si ay ugu gudbiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Xirfadaha muhiimka ah ee aaggan waxaa ka mid ah maareynta warbaahinta bulshada, istiraatiijiyadda nuxurka, iyo jihada hal abuurka.
Suuqgeynta Mashiinka Raadinta - Helitaanka taraafikada iyada oo loo marayo raadinta dabiiciga ah iyo lacag bixinta waxay u baahan tahay suuqleyda inay ku sii sugnaadaan isbeddellada joogtada ah. Tusaale ahaan, Google wuxuu cusbooneysiiyaa algorithm in kabadan 500 jeer sanadkii. Kordhinta mashiinka raadinta raadinta (SEO) iyo joogitaanka dabiiciga ah ayaa ah mudnaanta koowaad ee 69% ee suuqleyda Waqooyiga Ameerika ee SEO, xayeysiinta raadinta lacag bixinta, iyo kobcinta bogga ayaa ah dhammaan xirfadaha muhiimka ah ee ka jira aaggan.
Soosaarista Fiidiyowga - 76% suuqleyda waxay soo saaraan fiidiyowyo qeyb ka ah istiraatiijiyadooda suuqgeynta Fiidiyowyadan waxay ku dari karaan wareysiyo, animations, iyo qaabab sheeko oo kale. Tani waa qayb muhiim ah si loo gaaro Gen Z. 95% jiilka ayaa adeegsada Youtube, iyadoo 50% ka mid ah ay dhahayaan "ma noolaan karaan la'aan" websaydhka fiidiyowga lagu wado. Xirfadaha muhiimka ah ee aaggan waxaa ka mid ah tifaftirka fiidiyowga, animation, iyo soo koobidda waxyaabaha ku jira.
Falanqaynta xogta - 85% suuqleyda waxay u adeegsadaan aaladaha gorfaynta xeeladahooda suuq geyn. Falanqaynta ayaa ah xirfadda labaad ee ugu adag ee loo dejiyo hibaynta cusub ee suuq geynta, iyadoo 20% ka mid ah suuqleyda ay sheegaan inay adag tahay in la helo Inkasta oo dhibaatadan ay jirto, 59% suuqleyda ayaa qorsheynaya inay kordhiyaan xirfadahooda falanqaynta ganacsiga dhijitaalka ah ee ururadooda. Macdanta xogta, muuqaalka xogta, iyo falanqaynta tirakoobka ayaa dhammaantood ah xirfadaha muhiimka ah ee ka jira aaggan.
Blogging - 70% dadka suuqleyda ah waxay adeegsadaan baloogyo si ay ugu qaybiyaan waxyaabaha ujeedooyin suuq geyn ah iyo baloog garaynta si isdaba joog ah waxay kobcin karaan taraafikada Shirkadaha daabaca 16 + dhejiska bil kasta waxay heleen ku dhowaad 3.5 jeer taraafikada ka badan shirkadaha daabaca inta udhaxeysa 0-4 bil kasta. Xirfadaha muhiimka ah ee ka jira aaggan waxaa ka mid ah hal-abuurka, qoraalka qoraalka, iyo asalka.
Xirfadaha Hawlgalka - Xirfadaha waxqabadka istiraatiijiyadeed ayaa ah madaxa xirfadeed ee suuqgeeyayaasha dijitaalka ahi u aqoonsadaan inay muhiim u yihiin awood siinta iyaga si ay ula kulmaan baahidooda guud. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale la ogaaday inay tahay xirfadda ugu adag ee loo dejiyey inay ka soo baxdo tayada suuqgeynta cusub. Miisaaniyadda, isku dheellitirka ururada, iyo ROI iyo cabbiraadda cabbirka ayaa dhammaantood ah xirfadaha muhiimka ah ee ka jira aaggan.
Xirfadaha Khibrada Isticmaalaha - Falanqaynta khibradaha isticmaalaha ayaa ah isbeddelka ugu adag ee suuqleyda. Si kastaba ha noqotee, khabiiro khibrad u leh isticmaalaha ayaa kuu iftiimin kara dookha iyo macaamilka macaamiisha waxayna gacan ka geysan karaan qaabeynta websaydhada iyo barnaamijyada si loo wado wadista macaamiisha iyo iibintooda Cilmi-baaris, siinta aragti macaamiil akhlaaqeed, iyo codeynta ayaa dhammaantood ah xirfado muhiim u ah aaggan.
Xirfadaha Naqshadeynta Aasaasiga ah - 18% suuqleyda ayaa ka warbixiya xirfadaha naqshadeynta sida ay u adagtahay in laga helo hibaynta cusub ee suuq geynta, taas oo ka dhigaysa xirfada saddexaad ee ugu adag ee loo dejiyo helitaanka tayada cusub ee suuq geynta Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ku jira suuq geynta noocyadeeda oo dhan wali waxay u baahan yihiin inay muuqaal ahaan rafcaan u yeeshaan, xirfadahanna way sii socdaan in la dalbado. Xirfadaha muhiimka ah ee ka jira aaggan waxaa ka mid ah naqshadeynta garaafka, hal-abuurka, iyo qaabeynta muuqaalka.
Tags: Analyticsbachelor ee suuqgeyntahubkaaContent SuuqDatadesignemailshahaadada suuqahowlaha suuq geyntasuuq geyntajaamacada maryvilleSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaraadinta dabiiciga ahraadinta lacagta lehSuuq GoobidMedia Social Suuquikhibrada isticmaalahauxvideo maraktingwax soo saarka video